တလမှလစာ ၄၀၀၀၀ ကျပ် ရတဲ့တပ်ကြပ်ကြီးမိုက်ကယ်ရဲ့ဘဝ - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / ဖြစ်ရပ်မှန် / တလမှလစာ ၄၀၀၀၀ ကျပ် ရတဲ့တပ်ကြပ်ကြီးမိုက်ကယ်ရဲ့ဘဝ
တလမှလစာ ၄၀၀၀၀ ကျပ် ရတဲ့တပ်ကြပ်ကြီးမိုက်ကယ်ရဲ့ဘဝ
Apann Pyay 4:18 PM ပြည်တွင်းသတင်း , ဖြစ်ရပ်မှန် Edit
တပ်ကြပ်ကြီး မိုက်ကယ်နဲ့ သူ့သခင်ကြားက မေတ္တာတရားတွေ...
ပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့ ပစ္စည်း ဒါမှမဟုတ် ယမ်းကိုတွေ့တဲ့အခါမှာ ထိုင်ပြီးဟောင်ပြတတ်စေဖို့ လေ့ကျင့်ပေးထားတယ်။
ဖိုင်း ….. ဖိုင်း …. ဖိုင်း ….. ဆိုတဲ့ အမိန့်ပေးသံကို ကြားလိုက်တာနဲ့ သူက အစည်းအဝေးခန်းမရဲ့ ထိုင်ခုံတွေ စားပွဲတွေကြားကို ခေါင်းထိုးဝင်ရောက် ပြီး တစ်စုံတစ်ခုကို လိုက်လံရှာဖွေပါတယ်။ နောက်ထပ်အမိန့်တစ်စုံတစ်ရာ မရမချင်း သူက သူ့တာဝန်ကို ဆက်ပြီးထမ်းဆောင် နေပါတယ်။ မနက်ဖြန်မှာ ပြုလုပ်ဖို့ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံတော်အဆင့်တွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုအတွက် သူက တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာပါ။
Bomb Squad (မိုင်းရှာအဖွဲ့) လို့ အနက်ရောင်ပေါ်မှာ အဖြူရောင်နဲ့ ရေးထားတဲ့စာသားက သူ့ရဲ့တာဝန်ကို ဖော်ပြနေပါ တယ်။ သူ့နာမည်က မိုက်ကယ်ပါ။ သူက မိုင်းရှာခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။
‘နိုင်ငံအဆင့်ပွဲတွေတိုင်းအားလုံးနီးပါး သူပဲရှာရတာပါ၊ ပွဲတွေများတော့ မရေတွက်နိုင်တော့ဘူး” လို့ သူ့ရဲ့သခင် ရဲဒု တပ်ကြပ်အောင်ဖိုက်က ပြောပါတယ်။
ရွှအိုရောင်နဲ့ အနက်ရောင် ရောစပ် ထားတဲ့ မိုက်ကယ်က ဂျာမန် (ရှက်ပက်) အမျိုးအစား အယ်လ်ဇေးရှင်းခွေးတစ်ကောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ကို အမှတ် (၁) တပ်မတော် စစ် ဘက်ရေးရာ လုံခြုံရေး အတတ်သင် ကျောင်း (မင်္ဂလာဒုံ) မှာ လေ့ကျင့်သင် တန်းပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခြောက်လကြာသင်တန်းပေးလေ့ကျင့်ပြီးတဲ့နောက် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မိုင်းရှာဖွေရေးအဖွဲ့မှာ မိုက်ကယ်စပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာ တာဝန်ကျတဲ့မိုက်ကယ်က တိုင်းတစ်ခုလုံးမှာ တစ်ကောင်တည်းဖြစ်တဲ့ မိုင်းရှာခွေးပါ။ အဲဒါကြောင့် နေရာတော် တော်များမှာ နေ့ညမရွေးတာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး အစိုးရရုံးမှာ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီး ထပ်မံပေါက်ကွဲဖို့ရှိတဲ့ ၁၅၀ ပုလင်းတွေကို ရှာဖွေပေးခဲ့တာက သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်များစွာထဲက ထင်ရှားတဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်ခွေးအသုံးပြုပြီး မိုင်းရှာဖွေတဲ့သင်တန်းကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှာ တပ်မတော် သတင်းစု ဆောင်းရေးအတတ်သင်ကျောင်းမှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ပါတယ်။ မိုက်ကယ်က သင်တန်းအပတ်စဉ် (၁၀/၂၀၁၂) ဆင်းပါ။ မိုက်ကယ်နဲ့အတူ ခွေးအကောင်ရေ ၄၀ ကျော်ကို လေ့ကျင့်ပေးတာဖြစ်ပြီး လက်ရှိ မှာတော့ လေးကောင်သာကျန်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူတို့တွေက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ နေပြည်တော်နဲ့ မန္တလေးမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။
မိုင်းရှာခွေးတွေကို သင်ကြားပေးတဲ့ အခါမှာ လူအကူအညီနဲ့သင်ကြားတာ၊ ခွေးထိန်းကြိုးအသုံးပြုသင်ကြားပေးတာ၊ အနီးကပ်အမိန့်နာခံမှု သင်ကြားပေးတာ စသဖြင့် အမိန့်ပေးလေ့ကျင့်ရပါတယ်။ အမိန့်နာခံမှုစွမ်းရည်တိုးတက်လာတဲ့အခါမှာ ခွေးတွေကို အဝေးကနေ အမိန့်ပေးပြီးစေခိုင်းနိုင်တဲ့ အဆင့်ရောက်ရှိပါတယ်။ အမိန့် နာခံမှုစွမ်းရည်ရှိလာတဲ့စစ်ခွေးတွေကိုအနေအထားအမျိုးမျိုးမှာ မိုင်းရှာဖွေနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ရရှိအောင် ဆက်လက်လေ့ကျင့် ပေးရပါတယ်။
ယမ်းနံ့ပေးတာ၊ စွပ်ပြုတ်ရေအစက် ချပေးပြီး မိုင်းနဲ့ ပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့ ပစ္စည်းရှာဖွေတာ စတဲ့နည်းတွေကို လေ့ကျင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့ ပစ္စည်း ဒါမှမဟုတ် ယမ်းကို တွေ့တဲ့အခါမှာ ကိုက်တာကုတ်တာ စတဲ့ အ ကျင့်တွေကိုဖျောက်ပြီး ထိုင်ပြီးဟောင်ပြ တတ်စေဖို့ လေ့ကျင့်ပေးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ခွေးကိုင်စစ်သည်ရော ခွေးကိုပါ အန္တရာယ်မဖြစ်စေဖို့ အခုလို လေ့ကျင့်ပေးထားရတာပါ။
မိုင်းရှာခွေးတွေကို လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ အချိန်မှာကတည်းက အမိန့်နာခံမှုရှိ အောင် အဓိကသင်ကြားပေးတာဖြစ်ပြီး အစားအသောက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးစစ် ဆေးမှုတွေကို ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
‘အရင်ဆုံးရင်းနှီးမှုရှိမှ ကိုယ့်အမိန့်ကို နာခံမှာဆိုတော့ ရင်းနှီးအောင်လုပ်ရတယ်၊ တိရစ္ဆာန်ကို သင်ရတာဆိုတော့ ခက်ခဲတယ်၊ ဒါပေမဲ့ တွဲတာကြာတော့ ရင်းနှီးမှုနဲ့ သင်ရတာလွယ်လာတယ်” လို့ မိုက်ကယ် ရဲ့ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသူလည်းဖြစ်တဲ့ ဒုတပ်ကြပ် အောင်ဖိုက်က ရှင်းပြပါတယ်။
မိုင်းရှာခွေးတွေကို တာဝန်ကျတဲ့ ခွေးကိုင်စစ်သည်က လေ့ကျင့်သင်ကြားပေး ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာလည်း ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ရတာဖြစ်လို့ ကိုအောင်ဖိုက်က မိုက်ကယ်ရဲ့ သခင်တစ် ယောက်လည်း ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သား သမီမရှိတဲ့ သူတို့လင်မယား အတွက် မိုက် ကယ်က အရင်းနှီးဆုံးမိသားစုဝင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုအောင် ဖိုက်တို့ ဇနီးမောင်နှံနဲ့ မိုက်ကယ်တို့ အတူတူနေလာ တာ လေးနှစ်ကျော်လာခဲ့ပြီ။
ကိုအောင်ဖိုက်က “သူ့ကို ခွံ့မကျွေးရင် လုံးဝမစားဘူး၊ ဘယ်နှရက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အငတ်ခံတယ်၊ စမ်းသပ်ဖူးတယ်၊ နောက်ဆုံးမနိုင်လို့ ပြန်ခွံ့ကျွေးရတယ်”လို့ မိုက်ကယ့်ကို အစာခွံ့ရင်း ပြောပါတယ်။
အစာစားပြီးရင်လည်း တခြားခွေး တွေလို ချက်ချင်းထွက်သွားတာမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့ သူ့ပါးစပ်မှာပေနေတဲ့ အစာတွေကို ရေနဲ့ဆေးပြီး ခြောက်အောင် အဝတ်နဲ့သုတ်ပေးပြီးတဲ့ အထိ ရပ်စောင့်နေတတ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ပုံမှန်နေ့ တိုင်းဆေးတိုက်ရပါတယ်။ ဆေးတိုက်တဲ့ အခါမှာ အစာနဲ့ရောပြီးထည့်ကျွေးတာဖြစ် ပေမဲ့ ဆေးပါတဲ့ အစာကို ခွံ့တာနဲ့ ထွေးချတတ်ပါတယ်။ ဆေးမကြိုက်တဲ့မိုက်ကယ်က သခင်ရဲ့ စတေး (ဆတာယ) ဆိုတဲ့ အမိန့် ပေးမှ မျိုချတတ်ပါ တယ်။
မိုင်းရှာဖွေတဲ့ နည်းပညာတွေကို သင်ကြားမပေးခင်အချိန်မှာ ခွေးတွေရဲ့ အမိန့် နာခံမှုစွမ်းရည်ရှိဖို့ အခြေခံစစ်မိန့်သံ ၂၆ မျိုးကို အင်္ဂလိပ်အတိုကောက် အမိန့်ပေး ပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိုက်ကယ့်ကို နေ့စဉ် မနက်စာအတွက် ကြက်ဥ နှစ်လုံးနဲ့ နို့မှုန့် နှစ်ထုပ်ဖျော်ပြီးတိုက်ရပါတယ်။ နေ့လည်စာနဲ့ ညစာအတွက် ကြက်သားဆန်ပြုတ်ကျွေးရပါ တယ်။ ကြက်သားဆန်ပြုတ်ကို အရိုးပါရင် မစားတာကြောင့် အသားကို ကတ်ကြေးနဲ့ သေးသေးလေးတွေ ဖြစ်အောင်ညှပ်ပြီး ဆန်ပြုတ်နဲ့ရောပြီး ကျွေးရတာပါ။ အစာကို တစ်နေ့ သုံး နပ် အချိန်မှန်မှန် ဂရုစိုက်ပြီး ကျွေးရ ပါတယ်။
‘အစာကျွေးချိန် နောက်ကျရင် သူက မစားဘူး၊ စိတ် ကောက်တယ် လို့ ပြောရမှာပေါ့၊ အဲဒါကြောင့် မနက်အ စောထပြီး သူ့ အတွက် ချက်ပေးရတယ်၊ တခြားကလေးတွေကို ချီရင်လဲ သူက မကြိုက်ဘူး၊ ကလေးယူတော့မယ်ဆိုတဲ့အ ကြောင်း ပြောရင် အိမ်ရှေ့က ထောင့်မှာ သွားထိုင် နေတတ်တယ်၊ ခေါ်ရင်လဲ မလာ တော့ဘူး˘ လို့ ကိုအောင်ဖိုက်ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ မမြင့်နွယ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
အစားအသောက်အပြင် မိုက်ကယ်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အစာစားဆေး၊ အသည်းအားတိုးဆေး၊ အစာကြေဆေး၊ ငါး ကြီးဆီ၊ ဘားပလက် စတဲ့ဆေးတွေကို နေ့ စဉ်တိုက်ကျွေးရပြီး ခြောက်လ တစ် ကြိမ် စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ရတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
၂၀၁၅ ဇူလိုင်လ ထဲတုန်းက မိုက် ကယ်ရဲ့ တင်ပါးမှာ အနာဖြစ်ပြီး တိရိ စ္ဆာန် ဆေးရုံတက်ပြီး ခွဲစိတ်ကုသခဲ့ရပါတယ်။ အ နာကြောင့် တင်ပါးနားတစ်ဝိုက်က အ ရေ ပြားတွေ ကွာကျခဲ့ပြီး တစ်လခွဲခန့်ကြာအောင် အနာဒဏ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
‘သားသမီးလိုပါပဲ၊ သူဖြစ်တော့ ဆေးရုံမှာ နှစ်ယောက်လုံး သူ့အလှည့်ကိုယ့်အလှည့်ခွဲပြီး စောင့်ခဲ့ရတယ်၊ အိမ်ပြန်ရောက် တော့လဲ အနာကို သန့်အောင်ထားပေးရ တယ်၊ ဖြစ်တဲ့အချိန် တိရ စ္ဆာန်ဖြစ်လို့ စကားမပြောတတ်တာပဲ ရှိတယ်၊ အကုန်နားလည်တယ်၊ အစ်မမှာ လက်လျှော့ရ ပါပြီဆို ပြီး ငိုရသေးတယ်၊ ပြန်ကောင်းလာမှ သက်ပြင်းချနိုင်တယ်”လို့ မမြင့်နွယ်ဝင်းက ပြောပြတယ်။
မိုက်ကယ်ရောဂါ အမြန်ပျောက်ဖို့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အထောက်အပံ့အပြင်ကိုအောင် ဖိုက်တို့ လင်မယားက အိတ်ထဲကနေစိုက် ပြီး ကုသပေးခဲ့ ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မိုက်ကယ်အတွက် အိပ်ရာ၊ ကျောပိုးအိတ်၊ ခြုံ စောင်၊ ဖိနပ်စတာ တွေကိုလည်း သားသမီး အရင်းနဲ့ မခြား လိုလေသေးမရှိအောင် ဝယ်ပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
မိုင်းရှာခွေးတစ်ကောင်အတွက် နိုင်ငံတော်ကနေ တစ်ရက်ကို ငွေကျပ် ၁၀ဝ၀ နှုန်းနဲ့ တစ်လစာ ၃၀,ဝ၀ဝ ကျပ် ၊ အစာ စရိတ်သတ်မှတ်ပြီး ကျန်းမာရေးစောင့် ရှောက်မှုစရိတ်အတွက် တစ်လကို ကျပ် ၁၀,ဝ၀ဝ ၊ စုစုပေါင်း ၄၀,ဝ၀ဝ ကျပ် ထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မိုက်ကယ်ပြန်ပြီးနေကောင်းလာပြီး ခုနစ်လအကြာမှာ ကိုအောင်ဖိုက်တစ် ယောက် နေပြည်တော်ကို ပြောင်းရွှေ့မိန့် ကျလာပါတယ်။ မိုက်ကယ်နဲ့အတူတူ ပြောင်းခွင့်မရတာကြောင့် ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ကို သူက ငြင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပါ တယ်။
အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီး မိုက်ကယ်ရဲ့ မွေးနေ့ကို ကိုအောင်ဖိုက်တို့ ဇနီးမောင်နှံက နှစ်စဉ်ကျင်းပပေးပါတယ်။ သူ့မွေးနေ့မှာ ကိတ်မုန့်လှီးတာအပြင် တစ်ခြားခွေးတွေကို အစာကျွေးတဲ့ဒါနကို လည်း ပြုလုပ်ပေးလေ့ရှိတယ်လို့ သိရပါ တယ်။
လက်ရှိမှာ မိုက်ရဲ့ အသက်က လေး နှစ်ကျော် ငါးနှစ်ထဲကို ရောက်ရှိနေပါပြီ။ တာဝန်တွေကို ကျေကျေပွန်ပွန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ မိုက်ကယ်ကို မိုင်းရှာတပ်ဖွဲ့က တပ်ကြပ်ကြီးရာထူးအဆင့်အထိ တိုး မြှင့်ပေးထားပါတယ်။
"တပ်ကြပ်ကြီးမိုက်ကယ်"(Yangon Bomb Squad Team) တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းကွယ်လွန်
"တပ်ကြပ်ကြီးမိုက်ကယ်"(Yangon Bomb Squad Team) ဟာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း
ညပိုင်းကကွယ်လွန်. . .
တာဝန်ကြေလွန်းတဲ့ "မိုက်ကယ်"ဟာ ရန်ကုန်မြို့
တွင်း ဗုံးလေးလုံးရှာဖွေနိုင်ခဲ့၍ တပ်ကြပ်ကြီးရာထူး
ရခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ "မိုက်ကယ်" ဟာရန်ကုန်တိုင်း
အမျှ. . .အမျှ. . . အမျှ
တပျကွပျကွီး မိုကျကယျနဲ့ သူ့သခငျကွားက မတ်ေတာတရားတှေ...
ပေါကျကှဲစတေတျတဲ့ ပစ်စညျး ဒါမှမဟုတျ ယမျးကိုတှတေဲ့အခါမှာ ထိုငျပွီးဟောငျပွတတျစဖေို့ လကေ့ငျြ့ပေးထားတယျ။
ဖိုငျး ….. ဖိုငျး …. ဖိုငျး ….. ဆိုတဲ့ အမိနျ့ပေးသံကို ကွားလိုကျတာနဲ့ သူက အစညျးအဝေးခနျးမရဲ့ ထိုငျခုံတှေ စားပှဲတှကွေားကို ခေါငျးထိုးဝငျရောကျ ပွီး တဈစုံတဈခုကို လိုကျလံရှာဖှပေါတယျ။ နောကျထပျအမိနျ့တဈစုံတဈရာ မရမခငျြး သူက သူ့တာဝနျကို ဆကျပွီးထမျးဆောငျ နပေါတယျ။ မနကျဖွနျမှာ ပွုလုပျဖို့ရှိနတေဲ့ နိုငျငံတျောအဆငျ့တှဆေုံ့ပှဲတဈခုအတှကျ သူက တာဝနျထမျးဆောငျနတောပါ။
Bomb Squad (မိုငျးရှာအဖှဲ့) လို့ အနကျရောငျပျေါမှာ အဖွူရောငျနဲ့ ရေးထားတဲ့စာသားက သူ့ရဲ့တာဝနျကို ဖျောပွနပေါ တယျ။ သူ့နာမညျက မိုကျကယျပါ။ သူက မိုငျးရှာခှေးတဈကောငျဖွဈပါတယျ။
‘နိုငျငံအဆငျ့ပှဲတှတေိုငျးအားလုံးနီးပါး သူပဲရှာရတာပါ၊ ပှဲတှမြေားတော့ မရတှေကျနိုငျတော့ဘူး” လို့ သူ့ရဲ့သခငျ ရဲဒု တပျကွပျအောငျဖိုကျက ပွောပါတယျ။
ရှအိုရောငျနဲ့ အနကျရောငျ ရောစပျ ထားတဲ့ မိုကျကယျက ဂြာမနျ (ရှကျပကျ) အမြိုးအစား အယျလျဇေးရှငျးခှေးတဈကောငျ ဖွဈပါတယျ။ ၂၀၁၂ ခုနှဈ ဇှနျလမှာ မွနျမာနိုငျငံကို ရောကျခဲ့ပါတယျ။
သူ့ကို အမှတျ (၁) တပျမတျော စဈ ဘကျရေးရာ လုံခွုံရေး အတတျသငျ ကြောငျး (မင်ျဂလာဒုံ) မှာ လကေ့ငျြ့သငျ တနျးပေးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ခွောကျလကွာသငျတနျးပေးလကေ့ငျြ့ပွီးတဲ့နောကျ မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့မိုငျးရှာဖှရေေးအဖှဲ့မှာ မိုကျကယျစပွီး တာဝနျထမျးဆောငျပါတယျ။
ရနျကုနျမှာ တာဝနျကတြဲ့မိုကျကယျက တိုငျးတဈခုလုံးမှာ တဈကောငျတညျးဖွဈတဲ့ မိုငျးရှာခှေးပါ။ အဲဒါကွောငျ့ နရောတျော တျောမြားမှာ နညေ့မရှေးတာဝနျထမျး ဆောငျခဲ့ရပါတယျ။ ရနျကုနျတိုငျးဒသေ ကွီး အစိုးရရုံးမှာ ပေါကျကှဲမှုဖွဈပွီး ထပျမံပေါကျကှဲဖို့ရှိတဲ့ ၁၅၀ ပုလငျးတှကေို ရှာဖှပေေးခဲ့တာက သူ့ရဲ့စှမျးဆောငျရညျမြားစှာထဲက ထငျရှားတဲ့တဈခုဖွဈပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ စဈခှေးအသုံးပွုပွီး မိုငျးရှာဖှတေဲ့သငျတနျးကို ၂၀၁၂ ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလမှာ တပျမတျော သတငျးစု ဆောငျးရေးအတတျသငျကြောငျးမှာ စတငျဖှငျ့လှဈပါတယျ။ မိုကျကယျက သငျတနျးအပတျစဉျ (၁၀/၂၀၁၂) ဆငျးပါ။ မိုကျကယျနဲ့အတူ ခှေးအကောငျရေ ၄၀ ကြျောကို လကေ့ငျြ့ပေးတာဖွဈပွီး လကျရှိ မှာတော့ လေးကောငျသာကနျြရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။ သူတို့တှကေ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး၊ နပွေညျတျောနဲ့ မန်တလေးမှာ တာဝနျထမျးဆောငျနပေါတယျ။
မိုငျးရှာခှေးတှကေို သငျကွားပေးတဲ့ အခါမှာ လူအကူအညီနဲ့သငျကွားတာ၊ ခှေးထိနျးကွိုးအသုံးပွုသငျကွားပေးတာ၊ အနီးကပျအမိနျ့နာခံမှု သငျကွားပေးတာ စသဖွငျ့ အမိနျ့ပေးလကေ့ငျြ့ရပါတယျ။ အမိနျ့နာခံမှုစှမျးရညျတိုးတကျလာတဲ့အခါမှာ ခှေးတှကေို အဝေးကနေ အမိနျ့ပေးပွီးစခေိုငျးနိုငျတဲ့ အဆငျ့ရောကျရှိပါတယျ။ အမိနျ့ နာခံမှုစှမျးရညျရှိလာတဲ့စဈခှေးတှကေိုအနအေထားအမြိုးမြိုးမှာ မိုငျးရှာဖှနေိုငျတဲ့ စှမျးရညျရရှိအောငျ ဆကျလကျလကေ့ငျြ့ ပေးရပါတယျ။
ယမျးနံ့ပေးတာ၊ စှပျပွုတျရအေစကျ ခပြေးပွီး မိုငျးနဲ့ ပေါကျကှဲစတေတျတဲ့ ပစ်စညျးရှာဖှတော စတဲ့နညျးတှကေို လကေ့ငျြ့ပေးတာဖွဈပါတယျ။ ပေါကျကှဲစတေတျတဲ့ ပစ်စညျး ဒါမှမဟုတျ ယမျးကို တှတေဲ့အခါမှာ ကိုကျတာကုတျတာ စတဲ့ အ ကငျြ့တှကေိုဖြောကျပွီး ထိုငျပွီးဟောငျပွ တတျစဖေို့ လကေ့ငျြ့ပေးထားတယျလို့ သိရပါတယျ။ ခှေးကိုငျစဈသညျရော ခှေးကိုပါ အန်တရာယျမဖွဈစဖေို့ အခုလို လကေ့ငျြ့ပေးထားရတာပါ။
မိုငျးရှာခှေးတှကေို လကေ့ငျြ့ပေးတဲ့ အခြိနျမှာကတညျးက အမိနျ့နာခံမှုရှိ အောငျ အဓိကသငျကွားပေးတာဖွဈပွီး အစားအသောကျဆိုငျရာ ကနျြးမာရေးစဈ ဆေးမှုတှကေို ပုံမှနျပွုလုပျပေးတယျလို့ သိရပါတယျ။
‘အရငျဆုံးရငျးနှီးမှုရှိမှ ကိုယျ့အမိနျ့ကို နာခံမှာဆိုတော့ ရငျးနှီးအောငျလုပျရတယျ၊ တိရစ်ဆာနျကို သငျရတာဆိုတော့ ခကျခဲတယျ၊ ဒါပမေဲ့ တှဲတာကွာတော့ ရငျးနှီးမှုနဲ့ သငျရတာလှယျလာတယျ” လို့ မိုကျကယျ ရဲ့ လကေ့ငျြ့သငျကွားပေးသူလညျးဖွဈတဲ့ ဒုတပျကွပျ အောငျဖိုကျက ရှငျးပွပါတယျ။
မိုငျးရှာခှေးတှကေို တာဝနျကတြဲ့ ခှေးကိုငျစဈသညျက လကေ့ငျြ့သငျကွားပေး ပွီး တာဝနျထမျးဆောငျတဲ့အခါမှာလညျး ကြှေးမှေးစောငျ့ရှောကျရတာဖွဈလို့ ကိုအောငျဖိုကျက မိုကျကယျရဲ့ သခငျတဈ ယောကျလညျး ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ သား သမီမရှိတဲ့ သူတို့လငျမယား အတှကျ မိုကျ ကယျက အရငျးနှီးဆုံးမိသားစုဝငျတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။ ကိုအောငျ ဖိုကျတို့ ဇနီးမောငျနှံနဲ့ မိုကျကယျတို့ အတူတူနလော တာ လေးနှဈကြျောလာခဲ့ပွီ။
ကိုအောငျဖိုကျက “သူ့ကို ခှံ့မကြှေးရငျ လုံးဝမစားဘူး၊ ဘယျနှရကျပဲဖွဈဖွဈ အငတျခံတယျ၊ စမျးသပျဖူးတယျ၊ နောကျဆုံးမနိုငျလို့ ပွနျခှံ့ကြှေးရတယျ”လို့ မိုကျကယျ့ကို အစာခှံ့ရငျး ပွောပါတယျ။
အစာစားပွီးရငျလညျး တခွားခှေး တှလေို ခကျြခငျြးထှကျသှားတာမြိုး မဟုတျဘဲနဲ့ သူ့ပါးစပျမှာပနေတေဲ့ အစာတှကေို ရနေဲ့ဆေးပွီး ခွောကျအောငျ အဝတျနဲ့သုတျပေးပွီးတဲ့ အထိ ရပျစောငျ့နတေတျပါတယျ။
သူ့ရဲ့ ကနျြးမာရေးအတှကျ ပုံမှနျနေ့ တိုငျးဆေးတိုကျရပါတယျ။ ဆေးတိုကျတဲ့ အခါမှာ အစာနဲ့ရောပွီးထညျ့ကြှေးတာဖွဈ ပမေဲ့ ဆေးပါတဲ့ အစာကို ခှံ့တာနဲ့ ထှေးခတြတျပါတယျ။ ဆေးမကွိုကျတဲ့မိုကျကယျက သခငျရဲ့ စတေး (ဆတာယ) ဆိုတဲ့ အမိနျ့ ပေးမှ မြိုခတြတျပါ တယျ။
မိုငျးရှာဖှတေဲ့ နညျးပညာတှကေို သငျကွားမပေးခငျအခြိနျမှာ ခှေးတှရေဲ့ အမိနျ့ နာခံမှုစှမျးရညျရှိဖို့ အခွခေံစဈမိနျ့သံ ၂၆ မြိုးကို အင်ျဂလိပျအတိုကောကျ အမိနျ့ပေး ပွီးလကေ့ငျြ့သငျကွားပေးတာ ဖွဈပါတယျ။
မိုကျကယျ့ကို နစေ့ဉျ မနကျစာအတှကျ ကွကျဥ နှဈလုံးနဲ့ နို့မှုနျ့ နှဈထုပျဖြျောပွီးတိုကျရပါတယျ။ နလေ့ညျစာနဲ့ ညစာအတှကျ ကွကျသားဆနျပွုတျကြှေးရပါ တယျ။ ကွကျသားဆနျပွုတျကို အရိုးပါရငျ မစားတာကွောငျ့ အသားကို ကတျကွေးနဲ့ သေးသေးလေးတှေ ဖွဈအောငျညှပျပွီး ဆနျပွုတျနဲ့ရောပွီး ကြှေးရတာပါ။ အစာကို တဈနေ့ သုံး နပျ အခြိနျမှနျမှနျ ဂရုစိုကျပွီး ကြှေးရ ပါတယျ။
‘အစာကြှေးခြိနျ နောကျကရြငျ သူက မစားဘူး၊ စိတျ ကောကျတယျ လို့ ပွောရမှာပေါ့၊ အဲဒါကွောငျ့ မနကျအ စောထပွီး သူ့ အတှကျ ခကျြပေးရတယျ၊ တခွားကလေးတှကေို ခြီရငျလဲ သူက မကွိုကျဘူး၊ ကလေးယူတော့မယျဆိုတဲ့အ ကွောငျး ပွောရငျ အိမျရှကေ့ ထောငျ့မှာ သှားထိုငျ နတေတျတယျ၊ ချေါရငျလဲ မလာ တော့ဘူး˘ လို့ ကိုအောငျဖိုကျရဲ့ ဇနီးဖွဈသူ မမွငျ့နှယျဝငျးက ပွောပါတယျ။
အစားအသောကျအပွငျ မိုကျကယျရဲ့ ကနျြးမာရေးအတှကျ အစာစားဆေး၊ အသညျးအားတိုးဆေး၊ အစာကွဆေေး၊ ငါး ကွီးဆီ၊ ဘားပလကျ စတဲ့ဆေးတှကေို နေ့ စဉျတိုကျကြှေးရပွီး ခွောကျလ တဈ ကွိမျ စဈဆေးမှုတှေ ပွုလုပျရတယျလို့ သိရ ပါတယျ။
၂၀၁၅ ဇူလိုငျလ ထဲတုနျးက မိုကျ ကယျရဲ့ တငျပါးမှာ အနာဖွဈပွီး တိရိ စ်ဆာနျ ဆေးရုံတကျပွီး ခှဲစိတျကုသခဲ့ရပါတယျ။ အ နာကွောငျ့ တငျပါးနားတဈဝိုကျက အ ရေ ပွားတှေ ကှာကခြဲ့ပွီး တဈလခှဲခနျ့ကွာအောငျ အနာဒဏျခံခဲ့ရပါတယျ။
‘သားသမီးလိုပါပဲ၊ သူဖွဈတော့ ဆေးရုံမှာ နှဈယောကျလုံး သူ့အလှညျ့ကိုယျ့အလှညျ့ခှဲပွီး စောငျ့ခဲ့ရတယျ၊ အိမျပွနျရောကျ တော့လဲ အနာကို သနျ့အောငျထားပေးရ တယျ၊ ဖွဈတဲ့အခြိနျ တိရ စ်ဆာနျဖွဈလို့ စကားမပွောတတျတာပဲ ရှိတယျ၊ အကုနျနားလညျတယျ၊ အဈမမှာ လကျလြှော့ရ ပါပွီဆို ပွီး ငိုရသေးတယျ၊ ပွနျကောငျးလာမှ သကျပွငျးခနြိုငျတယျ”လို့ မမွငျ့နှယျဝငျးက ပွောပွတယျ။
မိုကျကယျရောဂါ အမွနျပြောကျဖို့ နိုငျငံတျောရဲ့ အထောကျအပံ့အပွငျကိုအောငျ ဖိုကျတို့ လငျမယားက အိတျထဲကနစေိုကျ ပွီး ကုသပေးခဲ့ ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ မိုကျကယျအတှကျ အိပျရာ၊ ကြောပိုးအိတျ၊ ခွုံ စောငျ၊ ဖိနပျစတာ တှကေိုလညျး သားသမီး အရငျးနဲ့ မခွား လိုလသေေးမရှိအောငျ ဝယျပေးထားတာ တှရေ့ပါတယျ။
မိုငျးရှာခှေးတဈကောငျအတှကျ နိုငျငံတျောကနေ တဈရကျကို ငှကေပျြ ၁ဝဝဝ နှုနျးနဲ့ တဈလစာ ၃၀,ဝဝဝ ကပျြ ၊ အစာ စရိတျသတျမှတျပွီး ကနျြးမာရေးစောငျ့ ရှောကျမှုစရိတျအတှကျ တဈလကို ကပျြ ၁၀,ဝဝဝ ၊ စုစုပေါငျး ၄၀,ဝဝဝ ကပျြ ထောကျပံ့ပေးတယျလို့ သိရပါတယျ။
မိုကျကယျပွနျပွီးနကေောငျးလာပွီး ခုနဈလအကွာမှာ ကိုအောငျဖိုကျတဈ ယောကျ နပွေညျတျောကို ပွောငျးရှမေိ့နျ့ ကလြာပါတယျ။ မိုကျကယျနဲ့အတူတူ ပွောငျးခှငျ့မရတာကွောငျ့ ပွောငျးရှခှေ့ငျ့ကို သူက ငွငျးပယျခဲ့တယျလို့ ပွောပါ တယျ။
အိမျကိုရောကျလာတဲ့အခြိနျကစပွီး မိုကျကယျရဲ့ မှေးနကေို့ ကိုအောငျဖိုကျတို့ ဇနီးမောငျနှံက နှဈစဉျကငျြးပပေးပါတယျ။ သူ့မှေးနမှေ့ာ ကိတျမုနျ့လှီးတာအပွငျ တဈခွားခှေးတှကေို အစာကြှေးတဲ့ဒါနကို လညျး ပွုလုပျပေးလရှေိ့တယျလို့ သိရပါ တယျ။
လကျရှိမှာ မိုကျရဲ့ အသကျက လေး နှဈကြျော ငါးနှဈထဲကို ရောကျရှိနပေါပွီ။ တာဝနျတှကေို ကကြေပြှေနျပှနျထမျးဆောငျခဲ့တဲ့ မိုကျကယျကို မိုငျးရှာတပျဖှဲ့က တပျကွပျကွီးရာထူးအဆငျ့အထိ တိုး မွှငျ့ပေးထားပါတယျ။
မိုငျးရှငျးလငျးရေးတပျသားမိုကျကယျ ကတော့ အခွားရဲဘျောတှနေဲ့အတူ တာဝနျထမျးဆောငျဖို့ တကျကွှနဆေဲ ဖွဈပါတယျ။
"တပျကွပျကွီးမိုကျကယျ"(Yangon Bomb Squad Team) တာဝနျထမျးဆောငျရငျးကှယျလှနျ
"တပျကွပျကွီးမိုကျကယျ"(Yangon Bomb Squad Team) ဟာတာဝနျထမျးဆောငျရငျး
ညပိုငျးကကှယျလှနျ. . .
တာဝနျကွလှေနျးတဲ့ "မိုကျကယျ"ဟာ ရနျကုနျမွို့
တှငျး ဗုံးလေးလုံးရှာဖှနေိုငျခဲ့၍ တပျကွပျကွီးရာထူး
ရခဲ့ခွငျးဖွဈပါသညျ။ "မိုကျကယျ" ဟာရနျကုနျတိုငျး
အမြှ. . .အမြှ. . . အမြှ